बजार सुधार र विकासको लागि आन्दोलनरत भइरहँदा किन आत्तिए लगानीकर्ता ? | आर्थिक अभियान
बजार सुधार र विकासको लागि आन्दोलनरत भइरहँदा किन आत्तिए लगानीकर्ता ?
असार ९, काठमाडौं । साताको पाँचौ कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक ४५ दशमलव २५ अंकले घटेको छ ।
नेप्से परिसूचक १ हजार ८४८ दशमलव २८ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २३७ ओटा धितोपत्रको ५० लाख ८ हजार ७७१ कित्ता शेयर ३३ हजार ४६० पटकमा रू. १ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख ९ हजार ६३४ दशमलव ९२ मा खरीदविक्री भएको छ ।
बजार सुधार र विकासका लागि लगानीकर्ताहरु आन्दोलनरत रहँदा बजार झनै ओरालो लागेको छ । ३ हजार २०० मा पुगेको बजार १ हजार ८४८ विन्दुमा झर्दा लगानीकर्ताले खर्बौं गुमाएका छन् । हालसम्ममा नियामक निकायबाट कुनै पनि लगानीकर्ताको हितमा नीतिगत सम्बोधन भएको छैन ।
लगानीकर्ता आन्दोलनको पछाडि दौडिरहनुभन्दा पनि घटेको बजारमा राम्रा कम्पनीहरु छानेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने शेयर विश्लेषकहरु बताउँछन् । हुन पनि हो शेयर बजार सधैं बढ्ने पनि होइन, घट्ने पनि होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नूपूर्व कम्पनीको आधारभुत पक्ष र प्राविधिक पक्षहरुलाई राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा घाटा कम हुने देखिन्छ । घट्दो बजारमा सकेसम्म ऋण लिएर शेयर कारोबार गर्न नहुने एक विश्लेषकले बताए । ती विश्लेषकका अनुसार घट्दो बजारमा पनि कम्पनी छानेर थोरै थोरै लगानी बढाउनुस् तर कम्पनीको हरेक पाटो राम्रोसँग बुझेर लगानी गरेमा घट्दो ट्रेण्डमा होस या बढ्दो ट्रेण्डमा प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ ।
उता निरन्तर घटिरहेको बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा झनै दबाब बढेको देखिएको छ। उनले बिहीवार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे चित्रण गर्दै मौद्रिक नीति कसिलो आउने संकेत गरेका थिए । जसका कारण पनि लगानीकर्ता थप त्रसित बनेका हुन् ।
यो दिन कारोबारमा आएका २३७ ओटा धितोपत्रमध्ये आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आँधिखोला लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत र सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । आँधिखोला लघुवित्तको शेयरमूल्य रू. ९६० दशमलव ७० र सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको रू. ६०५ दशमलव ३० पुगेको छ ।
यसैगरी यो दिन सवैभन्दा बढी शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् । शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बिहीवार ९ दशमलव ५६ प्रतिशत घटेसँगै उक्त कम्पनीका लागानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २२७ मा झरेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव २१ प्रतिशत घटेर रू. २०७ कायम भएको छ ।
यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री कुमारी बैंकको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ९ करोड ५३ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १९४ कायम भएको छ। त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा लक्ष्मी बैंक रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको रू. ६ करोड ३६ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचक समग्र घटेसँगै नेप्से परिसूचक घटेको हो । १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्ये सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको समूहगत परिसूचक ४ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ ।
२ हजार विन्दुमाथि पुग्यो नेप्से, कुल बजार पूँजीकरण २९ खर्बभन्दा बढी [२०७९ असार, १६]
दुई दिनपछि नेप्सेमा हरियाली [२०७९ असार, १५]
प्रि - ओपन सेसनमा ३.६० अंकले बढ्यो नेप्से, ११ ओटा कम्पनीको शेयर खरीदविक्री [२०७९ असार, १५]
प्रोफिट बुक गर्ने हावी भएपछि घट्याे नेप्से [२०७९ असार, १३]
प्रि - ओपन सेसनमा १०.३२ अंकले बढ्यो नेप्से, ४४ ओटा कम्पनीको शेयर खरीदविक्री [२०७९ असार, १३]